Amawele i-ANC, iFresh´n Rebel iguqula imodeli yayo yempumelelo | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 10/06/2021 11:30 | Kubuyekezwe ku- 10/06/2021 12:46 | General, Izibuyekezo
Okuhambisana nokwethulwa kwakamuva kwe- I-Fresh´n Rebel Clam Elite, Le nkampani ibuye yanquma ukunikeza umoya opholile uhla lwamawele, ama-headphone alo amibalabala aklanywe yi-ANC asezuze izibuyekezo eziningi ezinhle. Manje sezizoba nesici esingeziwe esizokwenza ukuthenga kwakho kukhange nakakhulu, futhi kukhanselwe umsindo.
Sihlaziye ngokujulile amawele amasha we-ANC avela kuFresh´n Rebel, ama-headphone angenantambo angenakuqedwa anokusulwa komsindo nedizayini enhle kakhulu. Hlala nathi bese uthola izindaba zokuthi iFresh'n Rebel iphakamise le modeli yama-headset ye-TWS ebesivele siyazi ngaphambili.
3 Ukukhanselwa komsindo nokulawulwa komsindo
4 Ikhwalithi yomsindo nesipiliyoni somsebenzisi
6 Ubuhle nobubi
Kulokhu iFresh´n Rebel ithathe isinqumo sokubheja ngohlobo lwayo olwaziwayo lwemibala, sizoba nayo itholakale, ngasinye sinegama laso lokuhweba ngamathoni alandelayo: Igolide, ipinki, okuluhlaza okotshani, okubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumnyama. Kulokhu, ibhokisi selakhiwe kabusha okukhulu, lisuka ekubeni uhlelo lokuvula eliphakeme laya kwisitayela se- "Shell". Ibhokisi linobukhulu obulinganiselayo namajika amakhulu okugcina kalula. Ngokwengxenye yayo, ngaphakathi sizoba nesibonakaliso se-LED sesimo samahedfoni kanye nenkinobho yokuvumelanisa.
Amahedfoni asezindlebeni, i-tonic ejwayelekile yamahedfoni I-TWS lapho benokukhanselwa komsindo okusebenzayo. Banomklamo ozojwayeleka kithi, ngaphandle kokude ngokweqile, zibanzi impela. Ngokuphathelene nokunethezeka, zilula futhi zinamaphedi ahlukahlukene, ngakho-ke ngeke sibe nezinkinga ekubekweni kwazo. Isisindo esiphelele sedivayisi singama-gramu angama-70, yize singazazi zombili izilinganiso eziqondile zecala lokushaja nesisindo samahedfoni ngokwahlukana. Kodwa-ke, kufanele sigcizelele ukuthi sinokumelana namanzi, umjuluko nothuli ngesitifiketi se-IP54, ngakho-ke singakusebenzisa ukuziqeqesha ngaphandle kwezinkinga.
Njengokwejwayelekile, asazi uhlobo oluqondile lwefayela le- Bluetooth lokho kugibela, yize kubhekwa ijubane lokubhangqa nokuzimela, konke kukhombisa ukuthi iFresh'n Rebel ikhethe iBluetooth 5.0 ejwayelekile. Sinezinzwa eziseduze ezizomisa isikhashana okuqukethwe kwe-multimedia uma sesikususile ezindlebeni zethu, kuzokwenzeka okufanayo lapho sikubeka emuva, ukuthi umculo uzoqhubeka uzwakale kusuka lapho wawukhona. Yini enye, amahedfoni yiwo I-Dual Master, okungukuthi, zingasetshenziswa ngokwehlukana ngoba zombili zixhuma ngqo nomthombo womsindo.
Mayelana nokuzimela, asinayo imininingwane ephathelene namandla e-mAh, kepha sithole cishe amahora angama-7 okuzimela ngamahedfoni ngasikhathi sinye, lUmkhiqizo uthembisa phakathi kwamahora ayi-7 kuya kwayi-9 ngokuya ngemodi yokukhansela umsindo esiyisebenzisile idatha efane nokuhlaziywa kwethu. Uma sibala amacala ahlinzekwa yicala, ukuzimela kudlulela cishe emahoreni angama-30 esewonke uma singayisebenzisi i-ANC, engahle yehle ifike emahoreni angama-25 uma siyivula. Ngokwengxenye yalo, ukukhokhiswa okuphelele kwebhokisi kuzoba amahora amabili, cishe ihora nengxenye uma sifuna ukushaja ngokuphelele amahedfoni.
Ukukhanselwa komsindo nokulawulwa komsindo
Ukukhanselwa komsindo kuzoqala ukusebenza uma sikwenza kusebenze, ngalokhu sizothinta amahedfoni, ngoba anepaneli yokuthinta. Ngaphezu kwalokho, singakhetha i- «Imodi Yezemvelo» ezobamba ingxenye yomsindo ngemakrofoni ukuze inikeze uhlelo lokuzihlukanisa olungeyona ingozi ezimweni ezithile.
Ukukhanselwa komsindo okujwayelekile: Izokhansela wonke umsindo onamandla amakhulu.
Ukukhanselwa komsindo kwanele ibanga lentengo esibhekene nalo, Ngokusobala zikude kakhulu nezinye izindlela ezinjenge-AirPods Pro, noma kunjalo, inqobo nje uma sibeka kahle amaphedi, ukukhanselwa komsindo kuzoheha ngokwanele. Kubonakala sengathi akuthinti kabi ama-bass kanye ne-mids esivivinyweni sethu, yize sima ukubona amathoni athile abucayi. Kulesi sigaba ngeke sikwenze iphutha uma sibheka imakethe nentengo enikezwa ezinye izindlela ngokukhanselwa komsindo okusebenzayo esingaxoxa nakho.
Ikhwalithi yomsindo nesipiliyoni somsebenzisi
Kuyalahleka ukuthi iFresh'n Rebel ikhethe ukuhlanganisa amawele e-ANC ohlelweni lokulinganisa ngokwezifiso esiluthola kuClam Elite. Noma kunjalo, amahedfoni afika kahle ukuwalinganisa, noma kunjalo njengoba kwenzeka kaningi kulolu hlobo lwemikhiqizo, zilungiselelwe ngokukhethekile ukunikela ngomphumela ongcono ngomculo wanamuhla wentengiso. Sinobukhona obuhle be-bass kanye nevolumu ephezulu kakhulu, okuthile okumangazayo uma kubhekwa ukuthi sizokuhlanganisa nokukhanselwa komsindo okusebenzayo.
Ezingeni lokuxhuma ababanga nankinga, xhuma ngokushesha futhi kalula, njengalapho ukhona I-Dual Master Sikwazile ukusisebenzisa ukuhlangabezana ne-headphone eyodwa kuphela ngezikhathi ezithile. Zixhunywe ngokushesha emthonjeni womsindo ngendlela efanayo naleyo enqamula ngayo futhi imise umculo lapho siwabeka esimweni, kulesi sigaba isipiliyoni besilungile. Ezingeni lokuthwebula izwi lethu ngombhobho, zanele ukubamba izingxoxo, yize lokhu kungelona iphuzu lazo eliphawuleka kakhulu, akunikezi okuhlangenwe nakho esingakubuyekeza njengokubi.
futhi iqiniso ukuthi abashiyi noma yisiphi isigaba sinokunambitheka okubi emlonyeni ukunakwa yiso. Icala lokushaja linethezekile, lihlukahluka futhi lihlala isikhathi eside. Ngokwengxenye yayo, ama-headphone asezindlebeni, into ecishe iphoqeleke kuma-headphone e-ANC futhi ingena ngaphansi kwemingcele "ejwayelekile". Akungabazeki ukuthi umnikelo omusha futhi ohehayo futhi ovela kumkhiqizo ogxile kakhulu emphakathini osemusha ohlose ukudala isipiliyoni esiyindilinga, ngaphandle kokuzenzisa okuningi kepha lokho kufeza ngqo lokho obekuthembisa.
Ukulungiswa kokugcina: 10 Juni ka-2021
Akukho nkokhelo Qi
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amawele i-ANC, iFresh´n Rebel iguqula imodeli yayo yempumelelo
U-Yealink UVC20, umngani omuhle we-teleworking [Buyekeza]